के तपाईंलाई कब्जियत भएको छ ? यसरी पाउनूस् छुटकारा | नेपालन्युज
के तपाईंलाई कब्जियत भएको छ ? यसरी पाउनूस् छुटकारा
दिशा निष्कासनको स्वभाविक आवृतिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले दिसा गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपटक पनि दिसा गर्न नसकेको अवस्थालाई कब्जियत भनिन्छ।
कब्जियत एक यस्तो स्थिती हो, जो पेट ठीक ढंगले सफा हुन पाउँदैन । साथै मल त्याग गरेको समयमा कष्ट हुन्छ ।कब्जियत पीडित आम व्यक्तिको तुलनामा कम पटक शौच गर्छन् । सामन्य व्यक्तिले दिनहुँ मल त्याग गर्छन् । तर, जसलाई कब्जियत छ, उनीहरु दुई र तीन दिनसम्म पनि शौच गर्न सकिरहेका हुँदैनन्।
यसरी पाइन्छ कब्जियतबाट छुटकारा
-थोरै मात्रामा पानी पिउनाले कब्जियत हुन सक्छ । यो समस्यामा आन्द्रामा जम्मा भएको खाना सुक्छ, त्यसैले दिसा गर्न अत्यधिक बल लगाउनुपर्छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्तिले बढी मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्छ । एक दिनमा करिब ३–४ लिटर पानीको सेवन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । खाना खानुभन्दा आधा घन्टाअघि वा पछि मात्र पानी पिउने बानी बसाल्नुपर्छ ।
- कब्जियतको समस्या छ भने मेवा र अम्बा खानुपर्छ । दुवै फलमा भएको गुणले हाम्रो पेटलाई फाइदा गर्छ ।
- तामाको भाडामा एक चम्चा त्रिफला पानीसँग मिसाएर रातभरि राख्ने र बिहान पानी छानेर पानी पिउनुपर्छ । यो बानी दिनहुँ गर्नाले पुरानोभन्दा पुरानो कब्जियतबाट पनि मुक्ति मिल्छ ।
-बदामको तेल पनि कब्जियतको समस्यामा एकदमै लाभदायक हुन्छ । यसले आन्द्राको कार्यक्षमता बढाउने काम गर्छ । -राति सुत्नुभन्दा अघि दूधमा एक चम्चा बदामको तेल मिसाएर पिउनुपर्छ । १५ दिनसम्म लगातार यो उपाय लागू गरेमा कब्जियत ठीक हुन्छ ।
-एक चम्चा मनतातो पानीमा एउटा कागती निचोरेर पिएमा आन्द्रामा जम्मा भएको मल बाहिर निष्काशन गर्न मद्दत मिल्छ ।
-रातिमा तातो दूध पिएर सुत्नुपर्छ । यदि आन्द्रामा मल टाँसिएर बसेको छ भने दूधमा क्यासटर तेल मिलाएर पिउनुपर्छ ।
-१ चम्चा मह तातो पानीमा मिसाएर बिहान खाली पेटमा खाने ।
-दिनमा दुई तीन कोसा पाकेको केरा खानाले वा एक चम्चा सुप र अदुवाको धुलोमा थोरै वीरेनुन मिसाई राती सुत्ने बेलामा मनतातो पानीसँग खानाले कब्जियत रोग ठिक हुन्छ ।
- रेसादार खानेकुरा खानुपर्छ । हरियो सागसब्जी, फलफूल वा सलादमा अत्यधिक मात्रामा फाइबर पाइन्छ । कब्जियतबाट छुटकारा पाउन पालकको जुस पनि लाभदायक हुन्छ ।
- १०–१२ वटा सुक्खा अंगुर दूधमा मिलाएर उमाल्ने र राति सुत्नुअघि पिउनुपर्छ । बिहान हुन्जेल कब्जियत खुल्छ ।
- ८–१० दिनसम्म लगातार बिहानपख खाली पेटमा सुन्तला या सुन्तलाको जुस पिउनाले कब्जियत ठीक हुन्छ । तर, जुसमा केही पनि नमिलाई खानुपर्छ ।
-दिनहुँ व्यायाम गरेमा कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।
-एक भाग हर्रो, दुई भाग बर्रो, चार भाग अमला मिलाएर चूर्ण बनाउने र एक एक चिया चम्चा बिहान साँझ मनतातो पानी सँग पिउने ।